आईफोन smaller सानो हुनेछ तर प्लस ब्याट्रीको साथ आईफोन समाचार
आईफोन smaller सानो हुनेछ तर प्लसको ब्याट्रीसँग
लुइस प्याडिला | | आईफोन एक्स, हाम्रो बारेमा
ब्याट्री हालको स्मार्टफोनमा सब भन्दा सान्दर्भिक पक्षहरू मध्ये एक हो र हालसालैका वर्षहरूमा कम्तिमा विकास भएको तत्त्व मध्ये एक हो। कम्पनीहरूले उनीहरूको उपकरणको सब भन्दा सानो सम्भावित ब्याट्रीलाई अधिकतम फिट गर्न प्रयास गर्दछन् र नयाँ आईफोन With का साथ, एप्पलले बोबिन लेस बनाउनु पर्छ किनकि यदि अफवाहहरू पुष्टि भयो भने स्मार्टफोन हालको भन्दा सानो हुनेछ, यद्यपि यसले उही स्क्रीनको आकार कायम गर्नेछ।। यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि यसले आईफोन Plus प्लसको उही ब्याट्री एक आईफोन as जत्तिकै साइजमा समावेश गर्ने एक तरीका फेला पारेको छ।
वास्तवमा, अर्को आईफोन of को फ्रेम अधिकतममा कम हुनेछ भन्ने तथ्यलाई धन्यवाद, .8..5,5 इन्च मोडेलको आकार व्यावहारिक रूपमा हालको आईफोन of को जस्तै हुनेछ, जसको स्क्रिन केवल7इन्च छ। यसको मतलब कम्पोनेन्टहरूका लागि कम ठाउँ छ, र ती मध्ये ब्याट्री छ। एप्पल कसरी २,2.700०० एमएएच ब्याट्री प्राप्त गर्न गइरहेको छ कि आकारको उपकरणमा फिट हुन? फोनको आन्तरिक कम्पोनेन्टहरू राखेको तरिका परिवर्तन गर्दै। एप्पलले यसको कम्पोनेन्ट्सको "स्ट्याक्ड" व्यवस्थामा स्विच गर्दछ, जसले अब स्मार्टफोनको सतहको १/ occup ओगट्छ केवल १/ occup ले मात्र ब्याट्रीको लागि थप ठाउँ छोड्दछ।
कम्पोनेन्टहरूले ओगटेको स्थानलाई कसरी कम गर्ने? सर्किट को धेरै तहहरु को प्रयोग गरी। के अहिले एकल तहमा राखिएको छ आधा मा काट्न सकिन्छ यदि हामी यसलाई दुई मा विभाजित। यस तरीकाले हामी अधिक क्षमताको साथ "L" ब्याट्री प्रयोग गर्न सक्दछौं। यदि हामी यसमा थप्छौं कि OLED स्क्रिन हालको LCDs भन्दा बढी सक्षम हुनेछ, र यो अफवाह पनि छ कि आईफोन fast मा छिटो चार्ज र इन्डक्शन चार्जिंग हुनेछ।, यस्तो देखिन्छ कि ब्याट्री एक बिन्दु हुन जानेछ जुन एप्पलले आफ्नो अर्को आईफोनमा हेरचाह गरिरहेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन टर्मिनलहरू » आईफोन एक्स » आईफोन smaller सानो हुनेछ तर प्लसको ब्याट्रीसँग
खैर, यो समय को बारे मा थियो! तिनीहरू पातलो हुँदैछन् र केको लागि? यदि% ०% प्रयोगकर्ताहरूले पातलोपन भन्दा बढी ब्याट्री रुचाउँछन् ... यदि एप्पलले अण्डा पठाउँदछ।
अर्को कुरा यो हो कि तिनीहरू मेमोरीको साथ स्क्र्याच गर्दैनन्, कि फोटोहरू बढ्ता तौल गर्दछन् र ती मेमोरीको साथ मुसा हुन्। म छक्क परें कि तिनीहरूले 16Gb xD मोडेल हटाए
एले, शुभ प्रभात।
एप्पलले पोर्ट्रेट मोडमा केन्द्रित दुई नयाँ आईफोन Plus प्लस विज्ञापन सुरूवात गर्‍यो
Vellum, जीवन स्वयं जस्तै सुन्दर वालपेपरको साथ एक अनुप्रयोग